Al Shabaab oo sheegtay Mas'uuliyadda weerar Naf hurnimo oo lagu beegsaday saraakiil Caddaan iyo Afrikaan ah.
Thursday November 11, 2021 - 17:00:06
Qaraxyo khasaara dhaliyay ayaa maanta ka dhacay qaar kamid ah degmooyinka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Jugta qarax aad u xooggan oo laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa galabta ka dhacay meel ku dhow isgoyska Banaadir ee degmada Hodon.
Sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah qaraxa ayaa haleelay kolonyo gaadiid ah oo kasoo baxay xarunta Villa Baydhabo ee degmada Wadajir, sida ay wararku sheegayaan qaraxa waxaa lala beegsaday saraakiil katirsan ciidamada AMISOM iyo maleeshiyaad katirsan Dowladda Federaalka.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxan, war rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Al Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxaynayay dagaalyahan naftiis hure ah.
Sida lagu sheegay warka kasoo baxay SHM kolonyada labeegsaday waxaa la socday saraakiil Caddaan iyo Afrikaan ah waxaana jira khasaara dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray shisheeyaha labeegsaday.
illaa iyo hadda faah faahin dheeri ah lagama hayo khasaaraha ka dhashay qaraxan lala beegsaday saraakiisha Ururka midowga Afrika kuwaas oo maalmahan ku sugnaa Muqdisho.
Dhinaca kale ugu yaraan sedax askari oo katirsan ciidamada booliska dowladda Federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax barqanimadii maanta lagula beegsaday isku imaatin ay uga sugnaayeen xaafadda Buula Xuubeey ee degmada Wadajir.